musha NAYE AMERICAN SoCCER STORI Canadian Soccer Players Jonathan David Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane April 24, 2020
Chinyorwa chedu chinokupa iwe chinyorwa chizere chebhuku raJonathan David rehucheche, Biography Chokwadi, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi chemusikana, Hupenyu hwePamoyo, Mararamiro, Mhuri, uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva panguva yake Yehudiki kusvika paakazozivikanwa.
Ehe, munhu wese anoziva kuti mutambi wenhabvu anoonekwa se "YeEurope Inotevera Big-chinhu" sekureva nhabvu (nhabvu) ine chekuita nayo. Zvikuru saka, chokwadi chekuti iye ari kudzikisira munzira yekupinda mune runyorwa rwekuva Akanakira Canadian Bhora veNguva Yese.
Nekudaro, vashoma kwazvo vateveri venhabvu vakambofunga kuverenga Jonathan David Bio yatinogadzirira, uye zvinonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Jonathan David Nyaya Yehudiki
Kutanga uye pamberi pezvese, mazita ake akazara ndiJonathan Christian David, uye anonzi "Canadian Pearl. ” Jonathan David akaberekwa pamwedzi wekutanga weMireniyamu itsva, 14th yaNdira 2000, muBrooklyn mune New York City, United States. Anobhadharisa bhora akaberekwa semwanakomana wekutanga kubva kuvana vaviri kuenda kuvabereki vake.
Panyaya yezuva rake rekuzvarwa, David mudiki aive mumwe wevacheche vashoma vanozvarwa panguva yekusagadzikana kukuru pasi pano pasi. Chokwadi ndechekuti, mutambi wenhabvu weCanada aive mwana ane rombo. Kutanga kweMireniyumu itsva hakuna kumbobvira kwaona chero hunyanzvi hwekuvhiringidzika kana iyo Y2K, (iyo inozivikanwa mireniyumu bug). Zvikanganiso hazvina kumbodzima moto netsaona nendege sekufungidzira hazvina kumbowira pasi kwedenga.
Millenium bug yakanga iri nhema sezvo ichitadza kuruma. - BBC
Maererano ne Sports-Magazine Knack, Vabereki vaJonathan David vaishanyira mhuri kuNew York achangozvarwa. Amai vake nababa vake vakabvuma kuva nemwanakomana wavo muUnited States kuti mhuri iwane hunhu kuburikidza naye.
Mwedzi mitatu mushure mekunge David aberekwa, vabereki vake vese vakafunga kuti havachafanira kugara muUnited States. Mhuri iyi yakabva kuPort-au-Prince, Haiti.
Jonathan Mhuri Yemhuri Yekare
Kuzvarwa muNew York uye kutamba kwechikwata chenyika cheCanada hazvireve kuti ane mabviro emhuri yekuNorth America. Mhuri yaJonathan David ine yavo midzi kubva kuHaiti, nyika yeCaribbean.
Kana iwe wakapinza munhoroondo, iwe ungangodaro urangarira iyo nyika yeCaribbean nechikonzero chinosuruvarisa. Hapana mumwe kunze kwenyika kwakaipisisa kudengenyeka kwenyika kwaNdira 12th 2010 uko kwakauraya hupenyu hwevanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvitatu.
Kudengenyeka kwenyika kweHaiti kweJanuary 2010. Mufananidzo: Telegraph
Nekutenda, ndichiri mudiki David makore e6 (makore matatu chete kudengenyeka kusati kwatanga), vabereki vake vakasarudza kutamira kuCanada. Kuve nemidzi yemhuri kubva kune imwe nyika isina kusununguka, kubereka mwanakomana wavo muNew York, saka kuziva zvakamunakira panguva chaiyo kunoreva zvinhu zviviri.
Kutanga, Jonathan David anogona kunge akabva kumhuri yakapfuma yemhuri. Kechipiri, vakave nerombo rekubva kuHaiti makore matatu kusati kwaitika njodzi ye3.
Mhuri yaJonathan David yakanogara kuOttawa (guta guru reCanada) ichibva kuHaiti. Kukura muSilicon Valley North kwaive kwakafinha kumwana mudiki. Nguva dzekurarama dzakangouya chete paaive nemhuri uye / kana chikoro.
Nezve dzidzo yake, vabereki vaJonathan David vakaita kuti anyore pachikoro chehurumende cheFrancophone chinonzi Louis Riel, kwaakakurira rudo rwake munhabvu (nhabvu).
Sekureva kweICI-Radio Canada, mutambi wenhabvu akataura nezve chikoro ichi chikonzero chekubudirira kwake kwebhola. Akave akapindwa muropa nekutamba nhabvu kuLouis Riel.
Basa Rokutanga Upenyu
Jonathan David achiri mudiki hupenyu hwaive hwakanyanya bhora-centric. Kunyangwe pazera rake repakati, mutambi wenhabvu haana kumboona nhabvu yake inorota hope sekupfuura. Kuchikoro, mudzidzi anoshingairira akatanga basa risiri repamutemo neboka rayo rebhora.
Kare ikako, David aive akatsunga kutamba mutambo muEurope. Kubva pakutanga chaipo, iye akange asina shungu yekutamba muNorth America zvakare aisafarira kuona Canadian nhabvu kana US Major League nhabvu. Kune mukomana ane moyo murefu, zvaisave nebasa kuti akatanga munharaunda makareba sei iye asina kumira kurota.
Kana nguva yacho yaive chaiyo, mudiki wenhabvu akatanga basa rekuzvininipisa munharaunda naGloucester Dragons. Iye akabva aenda kuOttawa Gloucester Hornets uye ipapo, Ottawa Internationals pakati pemakore a2011 kusvika 2018.
Mushure mekuedza kwakawanda kuyedzwa, mufaro wakazouya pakupedzisira veimba yaDavidi. Mufaro wevabereki vake nevemhuri wake waisaziva miganhu panguva iyo mwanakomana wavo paakakokwa kumiedzo neakatorwa nezvimwe zvikwata zveEurope.
Jonathan David Biografia- Nzira inoenda Mukurumbira Nyaya
Kune wese anoda bhora bhora, zvakanyanya kuoma kusiya vese vabereki nenhengo dzemhuri kumashure kuti vateedzere kurota kwenhabvu mune imwe nyika.
Maizviziva here? Mutambi wenhabvu weCanada akatanga kuravira kuEurope. David akakundikana miyedzo yake yekutanga yeRed Bull Salzburg neStuttgart vasati vapfuura izvo zveKAA Gent (kirabhu yebhola yeBelgian).
Kutanga hupenyu naDe Buffalo (zita reKAA Gent) rakanga risiri nyore zvakare. Munguva yekutanga kudzidziswa, David (ane makore gumi nematanhatu) akaudzwa kudzidzisa naGent's U16. Achitaura nezve chiitiko chinonetsa, akamboti:
“Ndainzwa kunge ndakanga ndaita zvakaipa zvekuti Ghent aisakwanisa kubatsira asi kundisunungura. Rimwe zuva masikati, kwakave nekudzidziswa kwechipiri uye nerombo rakanaka ndakakwanisa kupora.
Chivimbo changu chakawedzera apo muchairi paakandiudza kuti ndine chimwe chinhu chakakosha. "
Jonathan David Biography -Kukwira Kumukurumbira Nyaya
Kufananidza Gent kuve mumakirabhu ekirabhu hombe muEurope haina musoro. Kuti acherechedzwe, mudiki David (ane makore 19) akasarudza nzira yekutaurisa zvibodzwa zvakawanda kune vese makirabhu uye kwake nyika.
Vamwari venhabvu vakarumbidza nyowani weCanada wenhabvu neakafira scoring streak (akarova 5 mumitambo yake yekutanga mashanu), rwiyo rwakazoita kuti Gent awedzere chibvumirano chake kusvika 5.
Asides akarova zvibodzwa makumi matatu muBelgian League (mukati menguva pfupi), nyeredzi iri kusimuka yakazadzisa zviroto zvake nekunaya zvinangwa achiri pabasa renyika.
Maizviziva here?… David akabata matatu kukudzwa pagore ra2019 (pazera ramakore 19) zvese nekuda kwekugona kwake-chikoro kugona kwake kwaisaziva miganho. Aya marumbidzo anosanganisira:
(I) The 2019 CONCACAF Gold Cup Golden Boot mubayiro
(ii) Iyo 2019 CONCACAF Goridhe Mukombe Best XI
(iii) Canadian Men's Player yeMutambo weGore
Iyo Shandiso Yekufungidzira yakaratidza kukwirira kwake
Sachigaro waGent, Ivan de Witte akafunga kuwedzera kondirakiti yake zvakare (kusvika 2023) pavakangoona makirabhu akakomberedza vakamutenderedza sezvinoita shangu.
Kunyangwe iyo COVID-19 denda haina kukwana kumisa scouts kubva mukudzingisa siginecha yake. Kusvikira iyo Coronavirus yamisa ligi reBelgian, Dhavhidha anotyisa akange aunganidza 18 zvibodzwa uye makumi masere neshanu mumwaka wa 8/2019.
MuBelgium, parizvino hapana achiri kuyaruka akambokanganisa timu yake saJonathan David. Kubva mushure mekuwanikwa kwe Alphonso Davies, weCanada nhabvu nhabvu yakaratidza kuve inotevera yakajeka vimbiso yechizvarwa chenyika nhabvu. Vamwe vese, sekutaura kwedu, inhoroondo.
Ukama hwaJonathan David Hupenyu- Musikana, Wokuroora kana Kuroora?
Jonathan musikana ndiani? Kwayaka: SportsMag Knack
Zvinosuruvarisa, iyo Canadian nhabvu kuenderera mberi chete kunoita nhau kune yake inonakidza-kuvhinda kugona mano. Munguva pfupi yapfuura, kwave nechishuwo chechokwadi chekuda kuziva kana Jonathan David aine musikana kana kuona kuti kana akaroora- nemukadzi akavanzika nevana.
Mushure mekuchera kwakawanda padhuze pawebhu, tasvika pane mhedzisiro yekuti Jonathan David (panguva yekunyora) akaita nhamburiko yekuziva kusaratidza zvinhu zvehupenyu hwake hwehukama. Zvichida vabereki vake uye vanopa mazano vangazviona sepakutanga zvikuru pabasa rake.
Jonathan David Hupenyu hwega
Kusvika pakuziva Hupenyu hwaJonathan David. Attribute: Knack Sports Magazine
Jonathan David ndiani?, WeCanada Soccer Player
Kusvika pakuziva hupenyu hwaJonathan David kubva pagomba kunobatsira kuti iwe unzwisise iye zviri nani. Chekutanga, mutambi wenhabvu anotenda haisi yekungo rova ​​zvibodzwa asi nekuva nekupfava pane zvinhu zvinokanganisa moyo wake.
Chokwadi ndechekuti, Canadian yakabatana chaizvo netsika dzemhuri yeHaiti. Kunyanya zvakadaro, Jonathan David anokwanisa kuyeuka chiitiko chimwe nechimwe (chakanaka kana chakaipa) kubva paudiki hwake.
Kubva pahudiki hwake, mutambi wenhabvu weCanada akatakura Haiti mumoyo make kubvira nyika yatambura kudengenyeka kwenyika kwa2010. David Jonathan akapika kuti achashandisa mari yake yenhabvu kubatsira mhuri dzinoshaya muParera yeAntilles.
Zvakawanda paHupenyu Hwake:
Canadian wenhabvu ane nyika yemukati yekuzvimiririra, iyo inoita kuti kufambira mberi kwakakosha muhupenyu hwake hwega uye hwebasa. Wechidiki anokwanisa kutungamira nzira, achigadzira zvirongwa zvechokwadi zvehupenyu hwake.
Chekupedzisira, David munhu asinganzwe kuda kumiririra baba vake, mum kana hanzvadzi neunyanzvi hwemuviri (ma tattoos). Kubva mune zvechitendero maonero, iye muKristu akazvipira uyo asingazeze kurumbidza Mwari kana achinge awanda.
Kuziva Jonathan Jonathan Hupenyu Hwemhuri
Kune mudiki wenhabvu, mhuri yake yanga iri rutsigiro rwaasina kumbobhadhara. Uyai kunaya kana kupenya, vanga varipo kuti vamutsigire padanho rega re nzira yake kumusoro.
Muchikamu chino, tinokuunzira zvimwe chokwadi nezvevabereki vaJonathan David nenhengo dzemhuri.
Pamusoro paamai vaJonathan David
Zvinosuruvarisa, amai vekunakidzwa kwebhora vakafa mumazuva ekutanga aDecember 2019. David akaenda kuCanada panguva yaakawana nhau dzinoshungurudza dzekuti hutano hwaamai vake hwaikurumidza kushata.
Paakasvika padanho rerwendo (iyo London yekumira), akaudzwa kuti mai vake vakafa zvinosiririsa. Mariro aJonathan David mum akaitwa musi wa14 Zvita, 2019, nababamunini vake, babamunini, hanzvadzi, baba nedzimwe hama dzaivamo.
About Jonathan Jonathan baba
Ivo baba venhabvu varipo parizvino vanogara hupenyu hwega mushure mekurasikirwa nemukadzi wavo wavanoda kubva munaDecember 2019. Migwagwa yaDavid yekumarara ingadai isinganakidze sezvazviri pasina kubatsirwa kwababa vaanomuona sedanho ravo rekutanga kusangana chero zvinhu zvikatadza.
About Jonathan's siblings
Anodzora nhabvu weCanada ane hanzvadzi inoitika kuva yake uye hama yake chete. Zvinoratidzika kuti vabereki vaJonathan David vanofanira kunge vaine hanzvadzi yake kuHaiti kana Canada nekuda kwekuti aipedza makore mazhinji ehuduku hwake munyika idzi.
Jonathan Hupenyu Hwechokwadi
Jonathan Hupenyu Hwechokwadi. Nhabvu nhabvu inorarama hupenyu huzvininipisa muBelgium.
Canadian Pearl inorarama hupenyu hwakarongeka muguta reGhent, East Flanders (Belgium). Jonathan David anorarama anozvininipisa mararamiro, ayo asina kushandisa mari zvisina musoro.
Kungofanana nevamwe vadiki venhabvu, izvo; Iraima Konate, Eberechi Eze, nezvimwewo, nhabvu yemubhoti inobatirira kune zvinoshanda zvisingaite mari yakawanda.
Kukosha kweNet uye Mari
Zvichifunga kuti iye mudiki wenhabvu ane mutengo wakajeka we13 1K pasvondo, zvakanaka kutaura kuti mukwende waDavid Jonathan unokwanisa kunge uri pamadhora 676,000 miriyoni. Maererano neSoFIFA stats, weCanada nhabvu anogashira mubairo wepagore we € XNUMX.
Jonathan David Untold Chokwadi
Muchikamu chino, tichakuudza zvimwe zvinhu zvatinobheja iwe zvausina kumboziva nezveMuchina weCanada wekukopa chinangwa.
Chokwadi # 1: Zvinotaurwa neSOFIFA nezvake
Pane zera ramakore makumi maviri, Jonathan David ari kutopfura FIFA. Nesimba rake raanogona, pane mukana wekuti averengerwe pakati ivo gumi vakanyanya kurova pasi.
Chokwadi # 2: Kupindwa muropa kwePlayStation kwakapotsa kwamuuraya
Pakati pezera rake rekuyaruka, David akaona imwe nguva kupindwa muropa nePlayStation kwakamupedza. Izvi zvakauya panguva yaaida kutarisisa kuzadzisa zvinangwa zvake- kutamba bhora reEuropean.
Izvo zvakatora kuedza kweanonamata mwari kuti amuunzire. Nekuda kwekuzvidzora kwake kwakamupinza, David akadzivisa maitiro ake akapindwa muropa.
Chokwadi # 3: Iye waanonamata seChira chake Idol
Pasi rese, vazhinji vechidiki vatambi venhabvu vanotarisa kumusoro zvakanyanya pane zvifananidzo zvavo - izvi zvinosanganisira zvaifarirwa Christiano Ronaldo, Lionel Messi etc. Sezvo achikura nhabvu nhabvu, zvaisave zvakaoma kuti David awane wemuenzaniso kana chifananidzo chebhora.
Nezve chidhori chake chebhora, iwe unogona kufunga nezve kufarira kwemashura akambotaurwa. Nekudaro, zvichakushamisa iwe kuti zita chete rinouya Jonathan Ming David ndiro Dwayne De Rosario.
Ini ndinobheja ungadai usina kumbofungidzira Idol yake. Mufananidzo: NBC, Express uye miSoccer.
Chokwadi # 4: Speed ​​Facts
Maizviziva here? Canadian (pazera rechidiki makumi maviri) ane kumhanya kunosvika makumi matatu nemakiromita neawa. Kutonga, nenzira, ari kutora bhizimusi rake rekumhanyisa, isu tine chokwadi kuti Jonathan David aisazombomiswa pakati ari vatambi vepamusoro 5 vanokurumidza kwazvo munyika.
Vhidhiyo iri pazasi yaizokupa zvikonzero nei vazhinji vekumusoro makirabhu eEurope akakumbira kusaina kwake.
Tinokutendai nekuverenga chinyorwa ichi pana Jonathan David. LifeBogger inoshingirira kururamisa uye kururamisa muitiro hwedu hwezuva nezuva nyaya dzehudiki uye biography chokwadi. Ona chimwe chinhu chisingatarise chaizvo muchinyorwa chino, ndapota isa mhinduro yako kana taura nesu.